Isikhululo seHarpe "Beleage" (81 sqm, abantu aba-2) - I-Airbnb
Isikhululo seHarpe "Beleage" (81 sqm, abantu aba-2)
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguEnno
Ukuhlehla elizweni ... Ixesha liphelile kuthulekile kwisikhululo sikaloliwe selizwe elidala e-Altmark kufutshane ne-Arendsee. Indawo eyahlukileyo kunye neyodwa inokujongwa ngeenyawo, ngebhayisekile okanye ihashe.
"I-Beleage" yesitishi esinophahla oluphezulu kunye nomgangatho wokhuni obuyiselweyo ngamabomu kulula kwaye ukhululekile kunye nomxube wefenitshala endala kunye neengcezu zanamhlanje kwiitoni ezikhanyayo.
Ukuba uyalithanda ilizwe kunye nokuzola, ukuhlala kwisikhululo sikaloliwe esidala saseHarpe (Altmark) kunokuba yinto efanelekileyo kuwe. Indawo ikumema ukuba uhoxise iintsuku ezimbalwa kwaye uchithe ixesha lokuzonwabisa.
Isakhiwo esidwelisiweyo sokwamkela iindwendwe ukususela ngo-1921 sahlaziywa ngokupheleleyo ngo-2013. Eli gumbi lalikade liyindawo esemthethweni yeReichsbahners abenza umsebenzi wabo esitishini. Ngoku indlu endala eqaqambileyo enesilingi eziphezulu kunye nemigangatho eyenziwe ngamaplanga ifakwe ngokupheleleyo kwaye ngamabomu i-spartan. Ilungiselelwe abantu aba-3 kwaye inegumbi lokulala elikhulu elinebhedi eyi-180x200, igumbi lokuhlala, igumbi lokulala kunye nokufunda kunye nebhedi 160x200, igumbi lokuhlala ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela emini. Ukusuka kuzo zonke iifestile unombono omangalisayo wendawo ezolileyo.
Isikhululo sikaloliwe sithe qelele kancinane kwilali engenazo izakhiwo zasebumelwaneni. Inkonzo kaloliwe yayeka kwiminyaka embalwa edlulileyo.
Ezinye zezixhobo zikaloliwe zisenokubonakala; nangona kunjalo, indalo iphantse yawathatha ngokupheleleyo amaqonga amadala, iindlela zokulayisha kunye neerempu zokulayisha.
Ngelishwa, nangona uhlala kwisikhululo sikaloliwe, awukwazi ukuza ngqo ngololiwe - umgca ubungenawo uloliwe iminyaka esibhozo. Eyona ndlela ilungileyo yokufika eHarpe ngemoto.
Nangona kunjalo, ndihlala ndihlala "kwizithuthi zikawonkewonke", ezisebenza kakuhle: ngesitimela ukuya eSeehausen (Altm) okanye eSalzwedel, emva koko ngomgca webhasi we-200 ukuya kwi-"Leppin, B191" yokumisa. Ukusuka apho kunye ne-dial-a-bus ukuya eHarpe.
Ilali yaseHarpe yilali encinci yesitalato enemithi emidala kwaye ikumantla eAltmark kwindawo ezolileyo kakhulu, enemithi. I-Arendsee kunye nedolophu enegama elifanayo kunye neendawo zokubonelela eziqhelekileyo zimalunga neekhilomitha ezi-6 njengoko i-crow ibhabha. I-Altmark-Rundkurs ikhokelela kwi-Harpe, i-500 km yendlela yomjikelezo omude ochukumisa iindawo ezintle kakhulu ze-Altmark. IAltmark ngokwayo yenye yezona ndawo zithuleyo kumantla eJamani.
Umbuki zindwendwe ngu- Enno
Ich bin ein Fan alter Landbahnhöfe, und mit dem Bahnhof Harpe habe ich mir einen großen Traum erfüllt. Ich lebe hier, arbeite in Berlin und habe eigentlich ostfriesische Wurzeln - drei Dinge, die so gar nicht, aber dennoch sehr gut zusammenpassen.
Ich bin ein Fan alter Landbahnhöfe, und mit dem Bahnhof Harpe habe ich mir einen großen Traum erfüllt. Ich lebe hier, arbeite in Berlin und habe eigentlich ostfriesische Wurzeln -…
Ukuba unemibuzo okanye iingxaki, ndihlala ndifumaneka ngokobuqu okanye ngomnxeba.